5 yakakosha mirairo muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Wese munhu akamboshanda neLinux anoziva izvozvo nzira yakanakisa yekuwana zvakazara mairi iri neyekuraira koni. Iyo koni inokutendera iwe kudzora rinoshanda rese iro rinoshanda system, sekureba sekunge iwe uchiziva iwo akakosha mirairo.
Kana iwe uri newbie munyika yeLinux uye usingazive iyi mirairo, nhasi ndinokuunzira iyo 5 inonyanya kukosha mirairo muLinux, Yakakosha mirairo iwe yausingakwanise kuita pasina.
4 Yakakosha mirairo yekushandisa mapakeji mamaneja (apt, pacman ...)
5 Nano (chinyorwa faira mupepeti)
Iwo wekutanga kuraira isu tine mune iyo runyorwa ndiyo inozivikanwa Sudo, izwi rakareruka iro kana rakatungamirwa nechero kuraira, richariita neropafadzo dzemutungamiri.
Kana isu tiri kubhurawuza maforodha uye madhairekitori mune iyo koni, isu tinoda rairo inotitaurira zvirimo mumaforodha, kuziva patiri. Izvi zvinoitwa ne ls rairo, rairo yatinoti yakaenzana neWindows dir.
ls (ratidza nyore kunyora)
Ls -l (ratidza rondedzero ine ruzivo rwefaira rega rega senge saizi, mvumo kana zuva).
Nguva zhinji isu tiri kuita rairo uye isu takakanganwa syntax uye kubatsira kwesarudzo imwe neimwe. Ndo izvo zvinorairwa nemurume, iwo murairo kana ukaiswa pamberi pechero rairo, ndichakutorera bhuku rakazara kubva apa.
Tora bhuku remutemo wenano
Yakakosha mirairo yekushandisa mapakeji mamaneja (apt, pacman ...)
MuLinux command console tichagara tichiisa nekuvandudza mapakeji, kunyanya kana isu tiri kutarisira system. Kune izvi, anonzi mapakeji mamaneja anoshandiswa, ayo anoshandiswa nemimwe mirairo yatinofanira kuziva nemusoro. Ndiri kuzotsanangura mirairo yevaviri vanozivikanwa, apt-tora (Ubuntu naDebian) uye pacman (Arch Linux uye Manjaro).
Isa dhcpd package neakafanira-tora
Isa dhcpd package ne pacman
Gadziridza sisitimu ne pacman (yakashandiswa zvakanyanya mukuburitsa kupihwa kwekuburitsa)
Nano (chinyorwa faira mupepeti)
Kana iwe uri linux system maneja, iwe unozoziva kuti iwe unofanirwa kugara uchive kugadzirisa mafaira ekugadzirisa, matinofanira kugadzirisa mitsara kuti ienderane nezvinodiwa. Izvi zvinogona kuitwa zvirinyore kubva kumutsetse wekuraira neiyo nano chirongwa, yakanyanyisa kurongeka kuraira zvinyorwa edhita inowanikwa. Kuti timhanye, isu tinongofanirwa kunyora nano ichiteverwa nenzira yefaira.
Rongedza iyo linux network yekumisikidza faira
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » 5 yakakosha mirairo muLinux
Sinamoni 3.2 yave kuwanikwa